सविता माताको सनसनीपूर्ण भवि*ष्यवा*णी, ‘अब देशमा राजा फर्कीन्छ’ …भिडियो – Bishal4You
Bishal4You १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १५:१७
झन्डै दुई तिहाइको सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डका किन एकै समयमा उही खाले अभिव्यक्ति आए ? उनीहरूले भनेजस्तै अहिले संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध खतरा देखिएकै हो त ? यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको विषय हो यो। नेताहरूले कोठे बैठकमा षड्यन्त्र सुरु भएको बताउन छाडेका छैनन्। सार्वजनिक रूपमा बोल्दा भने उनीहरू व्यवस्थाविरुद्ध कसैले चलखेल गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्। आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा रामकृष्ण अधिकारी लेख्छन्- मूलतः तीन कारणले अहिले व्यवस्थाविरोधी चलखेल सुरु भएको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका छन्।
पहिलो, आफ्नै पार्टीभित्रको एकतामा भएको ढिलाइ, दोस्रो, चुनावका बेला जनतामा बाँडेको जनअपेक्षाअनुसारको काम गराइमा देखिएको विलम्ब र तेस्रो, नेतृत्वमाथिको निरन्तर बढ्दो ‘आक्रमण’। नेकपा प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गणतन्त्र खतरामा नपरेको तर्क गर्छन्। ‘गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भनेर किन बोल्दै हिँड्न परेको हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूलाई ? कुनै पनि प्रणाली त्यतिबेला खतरामा पर्छ, जतिबेला हामी राम्रो काम गर्दैनौं। जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं।’ काम भएको अनुभूति जनताले नपाउने हो भने कुनै पनि प्रणाली खतरामै पर्ने उनले बताए। श्रेष्ठले भने, ‘ठूलो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जाऊँ भन्ने मेरो धारणा हो। म अहिल्यै गणतन्त्र खतरामा परेको देख्दिनँ। हामी कामै गर्न नसक्ने, जताततै अलमलमा पर्ने हो भने त्यो सम्भावना बढ्दै जान्छ।’ उनले यतिबेला राजतन्त्रै नआए पनि अन्य शक्तिहरू हाबी हुन सक्ने बताए।
महासचिव विष्णु पौडेल पनि नेताहरूले समग्र विषयमा कुरा गर्दा यस्ता चलखेल पनि हुन सक्छ है भनेर संकेत मात्र गरेको बताउँछन्। ‘संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध खतरा भयो भन्ने नेताहरूको धारणा होइन। चलखेल गर्न सक्छन् भन्ने संकेत मात्र गर्न खोज्नुभएको हो,’ महासचिव पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेताहरूले यो विषय त्यति गम्भीर भएर उठाएका हैनन्।’